Cabdirizak Bashir Axmed oo ku magac dheer “Hogol Caafi” waxuu bilaabay inuu gabyo asagoo jiro 7 sano kaliya. Kadib qoyskiisa waxay u guureen Hadaaftimo, halkaas uu Cabdirizak iskuulka ka dhigtay kuna bartay suugaanta iyo murtida Abwaaanada waaweyn ee Soomaalida. Halkaa waxaa uga korortay aqoon oo sare-u-qaadday hibada curinta uu Eebe ku galladaystay yaraantiisii.
Sida lagu yaqaanno Abwaannada Soomaalida, gabayadiisa badanaa waxay ku saabsanyihiin ka falcelin arrimo markaa qalbigiisa taabanaya. Cabdirisaq waxuu in badan ka qeyb qaatay wacyigelinta bulshada, waxuu gabayadiisa ku soo bandhigay magaalooyin badan sida Kismayo, Muqdisho, Bosaso, Hargeysa iyo Galkacayo.
Sanadkii 2019 ayuu u so wareegay dalka Turkiga uu hada ku suganyahay. Wali waxuu gabayga u isticmaalaa inu ku hormariyo dhaqanka Soomaalida iyo inuu kaga hadlo arimaha bulshada. Bishii sadexaad ee sanadkan waxaa loo magacaabay madaxa Dhaqanka iyo Suugaanta bulshada Soomaalida ku nool dalka Turkiga.
Abdirizak Bashir Ahmed war dheeri ah